कर्णेल लामाको मुद्दामा समाचारका लागि लन्डन क्रिमिनल कोर्ट धाउँदा धाउँदा… | संघीय पोस्ट :: SanghiyaPost
कर्णेल लामाको मुद्दामा समाचारका लागि लन्डन क्रिमिनल कोर्ट धाउँदा धाउँदा…
‘न्यायको जित भयो’- कर्णेल कुमार लामा
लन्डन (ओल्ड बेली)
नेपाल सरकार माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वताका बन्दीलाई यातना दिएको अभियोगमा साढे तीन वर्ष बढि लम्बिएको मुद्दामा कर्णेल कुमार लामाले अन्तत: मंगलबार सफाइ पाए । लन्डन क्रिमिनल कोर्ट (फौज्दारी अदालत) बाट उनले सफाइ पाएका हुन् । यातना सम्बन्धि दुई मुद्दा थियो लामामाथि । करम हुसेनको मुद्दामा गत महिनै सफाइ पाइसकेका थिए उनले ।
गत महिना करिब ७ हप्ता सुनुवाइ चलेपछि १२ सदस्यीय जुरीले लामो डेलिबरेसन (छलफल) पछि हुसेनको मुद्दामा सफाइ दिएपनि राउतको मुद्दा भने किनारा लगाउन सकेको थिएन । कोर्टको समर होलिडे शुरु हुने भएकाले न्यायधिशले ६ सेप्टेम्बरमा कोर्ट बस्ने जनाउ दिएर अदालती प्रक्रिया स्थगित गरेका थिए त्यतिबेला ।
मंगलबार जनक राउतको मुद्दामा पनि यथेष्ट प्रमाण नभेटिएपछि लामा दुवैमा निर्दोष सावित भए । अब उनलाई नेपाल वा अन्यत्र जान बाटो खुलेको छ । लामाका वकिलले उनी अब नेपाल गएर आफ्नो सैनिक करिअर शुरु
गर्ने बताइसकेका छन् । मंगलबार राउतबारेको निर्णय के आउला भन्नेतिर सबै चनाखो थिए । बेलायतस्थित नेपाली पत्रकारले पनि यसलाई नजिकबाट हेरिरहेका थिए ।
म र बीबीसी नेपाली सेवाका भगिरथ योगीले मंगलबार अन्तिम फैसला आउन सक्ने सुईंको अघिल्लै दिन पाइसकेका थियौं । अदालत जाने निर्णय गरियो । १०.३० बजे कोर्ट नं ६ मा इजलास शुरु हुने सूचना बाहिर भित्तामा टांसिएको थियो । तर, हामी पुग्दा १२.१५ बजिसकेको थियो । पछि डिफेन्स पढिरहेका साथी नारायण अधिकारी पनि मिसिए ।
क्रिमिनल कोर्टको पब्लिक ग्यालरी भित्र गएर प्रत्यक्ष सुनुवाइ हेर्न आम मानिसले पाउँछन् तर, सामान केही लान पाइन्थेन । त्यसैले म चाहिं भगिरथ र नारायणको झोला, मोबाइललगायत अरु सामान बोकेर बाहिरै कुरें । उनीहरु भित्र जांदा इजलास त सकिइसकेको रहेछ । हामीले ढोकामा लामाकी छोरीलाई भेट्यौं । उनले आनाकानी गर्दै निर्णय पोजेटिभ आएको संकेतमात्र गरिन्, खुलेर बोल्ने कुरा पनि भएन ।
करिब आधा घण्टापछि लामा र उनका वकिलहरु बाहिर आए । हाम्रो मुख्य स्वार्थ औपचारिक फैसला लिनुमा थियो । अभिभादन भयो, हात मिलाइयो तर लामाले केही प्रसंग निकालेनन् बरु बेलुका कुरा गरौंला नि पो भने । बेलुकासम्म कुरेर नेपाल समाचार पठाउन बिलम्ब हुने वाला थियो । लामाले जिते, जेलबाट रिहा भए आदि इत्यादि जस्ता सतही र भ्रामक हल्ला सोसियल मिडियातिर छाइसकेको थियो ।
हामीले खास के भयो जान्न प्रयत्न गरिरह्यौं । ‘न्यायको जित भयो’, लामाले पछि यत्ति भन्दा उनले सफाइ पाएको प्रमाणित भयो । यत्ति पाएर समाचार पूर्ण हुन्थेन । लामाका वकिललाई सोध्यौं, उनले पनि केही बोल्न मानेनन्, पछि विज्ञप्ति पठाउँला भने । लामालाई मैले एउटा तस्विर लिन आग्रह गर्दा उनले त्यो पनि मानेनन् । अनुमति बिना कोर्ट बाहिर तस्विर लिन जायज थिएन, जोडबल गरिन । लामासहित सबै लाखापाखा लागे । हामीले न पूर्ण समाचार पायौं न फोटो । जहिल्यै रोयटर्सको तस्विर प्रयोग हुंदै आएको थियो, फेरि त्यही अर्काइभ खोज्नुपर्ने भयो ।
यतिबेलासम्म केही अनलाइनले ‘हावा’ समाचार हालिसकेका थिए । हामी चाहिं कोर्टबाहिर समाचार ढुकेर बसेको बस्यै । बाहिर पृष्ठभूमि पुरानै अनि लिडमात्र लामाले जिते… लामा जेल मुक्त टाइपको समाचार आइसकेका थिए । जेल मुक्त त उनी अढाइ महिना जेल बसेर धरौटीमा पहिल्यै बाहिर थिए तर प्रहरी निगरानीमा ।
केही घण्टापछि दुवै पक्षका प्रेस विज्ञप्ति आए । अभियोजन पक्षले राउतको मुद्दामा लामालाई दोषी ठहर्याउन सक्ने पर्याप्त आधार नभएको भन्दै मुद्दा अघि नबढाउने निर्णय गरेपछि न्यायधिश जस्टिस स्वीनीले उनलाई
निर्दोष सावित गर्दै केसबाट सफाइ दिएका रहेछन् । सफाइ पाएर ओल्ड बेली बाहिर निस्कंदा लामा ज्यादै हँसिलो देखिन्थे । विगतको सुनुवाइका बेला उनी र परिवारको अनुहार त्यस्तो खुलेको हुन्थेन ।
लामालाई यो मुद्दाले जति मानसिक तनाव थियो, हामीलाई सूचना लिन त्यस्तै आपत । नेपाली दूतावास होस् वा अरु निकाय र व्यक्ति कोही नबोल्ने । कोर्टको मिडिया रिस्ट्रिक्सनले थाहा पाएर पनि लेख्न सम्भव थिएन । तर, नेपाली सेनाका वरिष्ठ अधिकृतलाई बेलायतमा परिवार भेट्न आउंदा समातेर विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार कानुन अन्तर्गत मुद्दा चलाइएकाले यसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चासो पाएको थियो । झण्डै एक मिलियन (दश लाख पाउण्ड) खर्च भएको मुद्दा जति खर्चिलो थियो, महत्व पनि त्यस्तै । नेपालबाट अफिस र मिडियाका साथीहरु बारम्बार अपडेट खोजिरहन्थे ।
गत महिना ज्यादै दु:ख पाइयो कोर्ट धाउंदा । करिब ७ हप्ताको सुनुवाइपछि अब त अन्तिम फैसला आउला भन्दा भन्दै चार दिन बिहान लगातार कोर्ट पुग्यौं हामी । तर, जुरी अन्तिम निर्णयमै पुग्न नसक्ने । डेलिबरेसन चलिरहेको छ मात्र भन्ने थाहा हुन्थ्यो, कहिले टुंगिने हो मेसो थिएन । ल्यापटप र रेकर्डर बोकेर बिहान बिहान निस्कंदा रेल भाडा उस्तै महंगो, खाने टुंगो हुन्थेन । फेरि कोर्ट भित्र केही लैजान नपाइने भएपछि जो भएपनि दुईजना संगै जानुपर्थ्यो । अघिल्लो महिना साथी कृष्णप्रसाद शर्माले केही दिन सामान कुरिदिएर हामी पालैपालो भित्र जान्थ्यौं । कोर्टको अघिल्तिर रहेको कोको क्याफेले दिनहुँ झोला बोकेर जाँदा हामीलाई चिनिसकेको थियो । बिहान एउटा कफी किनेपछि लन्च ब्रेक (एक देखि दुई बजेसम्म) सम्म त्यही क्याफेमा बसिन्थ्यो । ब्रेकपछि कोर्ट बस्थ्यो तर ५ मिनेट नबस्दै आजलाई सकियो भोलि बिहान दशबजे आउने… भनेर निर्देशन दिन्थे न्यायधिश । ५ मिनेट मुश्किलले भित्र बस्न दिनभर कुर्नुपर्थ्यो ।
निर्णय आउला भन्यो आउंदैन । यही अनिर्णित हुंदा साथी भगिरथ योगीको सपरिवार डेनमार्क जाने टिकट नै रद्द गर्नुपरेको थियो पैसा फिर्ता नहुने गरि । एकदिन त च्याम्बरबाटै ब्यारिष्टरले पब्लिक ग्यालरीमा नेपाली सञ्चारकर्मीहरु पनि छन् भनेपछि हामी झन् आत्तियौं । कोर्टले समाचार नलेख्न जारी गरेको निर्देशन पत्र पनि हात लाग्यो । उता लामाको परिवार हामी दिनंहु समाचार लिन गएको नरुचाउने । ‘तपाईंहरुलाई रमाइलो छ है । कर्णेल लामा जेल पर्ला र समाचार बनाउंला भन्ने चासो तपाईंहरुको होला, हामीलाई कम टेन्सन छैन् ।’ यस्तै यस्तै गुनासो सुन्नु पर्थ्यो हामीले । परिवारको आक्रोस र पीडा पनि स्वभाविक थियो । जेल परेको भए जीवन मरणको विषय थियो यो ।
मन खिन्न हुन्थ्यो । आखिर जे खप्की सहनुपरेपनि समाचार लिनु हाम्रो दायित्व थियो, हरेस खाएनौं । समाचार लिन जांदा बेलायती न्यायलयका केही प्रणाली भने जान्ने मौका पाइयो । यहाँ सुनुवाइमा १२ सदस्यीय जुरीको निर्णयलाई अन्तिम मानिंदो रहेछ । जुरी बहुमत (१०, २ वा ११, १) मा पुग्न सकेन भने फैसलै रोकिने ।
अर्को कुरा, लामाको मुद्दा संवेदनशील भएपनि बेलायती मिडियाले कहिल्यै समाचार बनाएनन् किनकी केस नटुंगिएसम्म मिडिया इम्बार्गो थियो । बेला बेला मैले कान्तिपुरमा समाचार पठाउँदा कर्णेल लामाले सचेत गराउँथे, ‘भाइ यहाँ कोर्टको आदेश मानेन भने त दुई वर्ष जेल जानुपर्छ, अलि बिचार गर्नुहोला लेख्दा ।’ मिडियामात्र होइन, जुरी सदस्यलाई पनि न्यायधिश प्रत्येक पल्ट भित्रको कुरा बाहिर ल्याउँदिन भन्ने कसम खान लाउँथे ।
राज्यले दुवै पक्षलाई कानुनी सहायता (लिगल एड) दिने प्रावधान यहाँ छ । सरकारले प्रतिवादीलाई पनि आफ्नो कुरा, प्रमाण जुटाउन अवसर र आर्थिक सहयोग दिने रहेछ ।
प्रकाशित: २३, भदौ २०७३ ।
उपत्यकामा यसकारण पराजित भयो माओवादी
संघीय समाजवादी नेवाः संघको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न
ओली र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र एउटै भन्दै खनिए पहिचानवादी नेता युवराज कार्की
Posted by admin on Sep 8 2016. Filed under Breaking News, पत्रपत्रिकाबाट, मुख्य खबर, विश्व/नेफेसो. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leavearesponse or trackback to this entry
10 Comments for “कर्णेल लामाको मुद्दामा समाचारका लागि लन्डन क्रिमिनल कोर्ट धाउँदा धाउँदा…”
September 22, 2016 - 10:38 am
Keep cheap cialis for women in inaccessible to children and animalsaplace.
September 22, 2016 - 3:34 pm
February 1, 2017 - 2:30 pm
Felt so hopeless looking for answers to my qutnnioss…uteil now.
November 17, 2016 - 7:59 am
November 18, 2016 - 2:51 pm
December 9, 2016 - 9:03 am
December 31, 2016 - 10:01 pm
After you compare offers, you can viagra reviews Online pharmacies areagreat way to Check out special offers to buying viagra by shopping online. Bookmark this site for buying viagra samples ? Find out the truth right here. Always come here first for liquid tadalafil to get low prices for this effective treatment Where can I find publications that discuss purchase cialis and learn more.
May 15, 2017 - 5:34 pm
4nt6pI This is one awesome blog article.Really looking forward to read more. Really Cool.
June 8, 2017 - 10:47 pm
Every after inaeven though we opt for blogs that we study. Listed below would be the most recent internet sites that we pick.
October 31, 2017 - 4:41 pm